जन्म कुण्डलीमा १२ वोटा नंम्बर हुन्छ ,जन्नुहोस राशि अनुसार तपाइको नंम्बर कतिहो ? - DerbyKhabar
जन्म कुण्डलीमा १२ वोटा नंम्बर हुन्छ ,जन्नुहोस राशि अनुसार तपाइको नंम्बर कतिहो ?
काठमाडौँ ।। तपाइको जन्म कुण्डलीमा देखीएको १२ वोटा नंम्बर मा तपाइको नंम्बर कुन हो ? राशि अनुशार जन्म कुण्डलीमा देखीएको १२ वोटा नंम्बरमा राशि अनुसारको नंम्बर दिएको हुन्छ । हरेकको जन्म कुण्डलीमा १ देखि १२ नंम्बर सम्म लेखिएको हुन्छ । कुण्डलीमा नंम्बर साथै ग्रहहरुको नाम पनि हुन्छ । राषी अनुसार नंम्बर र नंम्बर अनुसार ग्रहहरुको नाम लेखिएको हुन्छ । हरेकको जन्म कुण्डलीमा १२ वोटा नंम्बर फरक फरक स्थानमा हुन्छ । त्यसै अनुसारको हरेक ब्यक्तित्वको फरक भाग्य हुन्छ । यही कुण्डलीको आधारमा कुण्डली पढ्न जान्ने हरुले तपाइको भाग्य को बरेमा बताउछन् । जन्नुहोस राशि अनुसार तपाइको नंम्बर कतिहो ?
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)- १
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)- २
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)-३
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer)-४
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)-५
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo)-६
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra)-७
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio)-८
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)-९
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)-१०
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius)-११
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)-१२